Tababare Jurgen Klopp oo fariin culus u diray ciyaartoydiisa kahor kulanka caawa ee Genk – Gool FM
(Liverpool) 05 Nof 2019. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa fariin u diray ciyaartoydiisa kahor kulanka caawa ay naadiga Genk kula ciyari doonaan tartanka Champions League.
Jurgen Klopp ayaa tilmaamay in ciyaartoydiisa aysan ku habooneen inay kalsooni ka muujiyaan in natiijo fiican ay ka heli karaan kooxda Genk sidii dhacday labo isbuuc ka hor, sababtoo ah kulan kasta oo tartanka Champions League ah waxaa loogu dagaalamayaa hanashada tartanka ugu xiisaha badan ee heer kooxeed.
Liverpool ayaa ku garaacday kooxda reer Belgium ee Genk (4-1) labo isbuuc ka hor, waxayna caawa markale ku wada ciyaari doonaan garoonka Anfield, Reds ayaa raadinaysa inay gaarto guusheeda saddexaad ee xiriir ah si ay ugu gudbaan wareega xiga ee tartankan.
Haddaba macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp oo ka hadlayay ciyaarta caawa ayaa wuxuu yiri:
“Waxa jirta shaqo ay tahay inaan caawa qabano, mana ahan inaan meel kale diirada saarno, waa inaan ku noolaanaa daqiiqadan isla markaana aan guul gaarno”.
“Haddii aad lumiso kala badh ilbiriqsi qeyb ka ah tartanka Champions League waad guuldareysan doontaa”.
“Waan ognahay sida uu u adag yahay tartankan iyo sida dhibic walba ay qaali u tahay, waa dagaal aad u culus markasta shaki kuma jiro”.